20 အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad App များနှင့်ဇွန်လ၏ဂိမ်းများ၏ 2016 - သတင်း Rule
20 အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad App များနှင့်ဇွန်လ၏ဂိမ်းများ၏ 2016
ဇွန်လ၏နယူးက iOS app များ 2016 Motion ဓါတ်ပုံပါဝင်, splash - 360 ဗီဒီယိုကင်မရာ, Live.ly, ကောင်ဘွိုင်ပွဲ Stampeders, pixel ဖလားဘောလုံး 16 နှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စက်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “20 အကောင်းဆုံးကို iPhone နှင့် iPad app များကိုနှင့်ဂိမ်းများယခုလ” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 1st ဇူလိုင်လအပေါ်များအတွက် 2016 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
GIF များသို့သင်၏ဓါတ်ပုံများလှည့်နေတဲ့မိုဃ်းကောင်းကင်တိရစ္ဆာန်ရုံဘို့ကျွဲစီးဖို့, နှင့်ကို virtual-အဖြစ်မှန်ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးမှ code ကိုမှသင်ယူဖို့, ဒီလက iOS devices တွေကိုအသစ် app များနှင့်ဂိမ်းများတစ်ဦးမတူညီကြရွေးချယ်ရေးရှိပါတယ်.
အစဉ်အဆက်အဖြစ်, စျေးနှုန်းတွေအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကမှန်ကန်သောများမှာ, နှင့် IAP app တစ်ခုအချို့သောလမ်းအတွက် In-app ကိုဝယ်ယူတစ်ခုကိုဆိုတာကိုပြသ.
အန်းဒရွိုက်ရွေးချယ်မှုဟာသင့် platform သည်ဆိုပါက, သည်သီးခြားလစဉ် roundup ရှိပါတယ်, ဤနေရာတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်ရာ.
motion ဓါတ်ပုံ (အခမဲ့)
သင်တိုက်ရိုက်ဓါတ်ပုံများကို iOS အပေါ် feature ကိုအသုံးပြုပြီးခဲ့ကြ? ထူးဆန်း, Google ကနေဒီ app ကိုကအသုံးဝင်အောင်ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်မျှဝေနိုင် GIFs နဲ့ messaging app များထဲသို့အနည်းငယ်-ဒုတိယကလစ်များလှည့်လမ်းကိုတဆင့်. တတျမွောကျသော, ရိုးရှင်းပြီးပျော်စရာ.
splash - 360 ဗီဒီယိုကင်မရာ (အခမဲ့)
virtual reality 360 ဒီဂရီမြင်ကွင်းများကြုံနေရအကြောင်းပဲဖြစ်သွားသည်မဟုတ်: သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အောင်စေခြင်းငှါ. သငျသညျ VR နှင့်အတူဖန်တီးမှုရ itching ဆိုရင် splash ကျိန်းသေကြိုးစားနေရကျိုးနပ်သည်, Google ၏ Cardboard နားကြပ်နှင့်အတူကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည် 3D ကလစ်များသို့သင့်ရဲ့မြင်ကွင်းကျယ်ဗီဒီယိုများလှည့်. သင်တို့သည်လည်းကမ္ဘာတလွှားမှအခြားအသုံးပြုသူများ၏ "splash" browse နိုင်.
လန်ဒန်အပြာရောင် plaque (အခမဲ့)
အင်္ဂလိပ်အမွေအနှစ်ကနေဒီအရာရှိတဦးက app ကိုနာမည်ကျော်သမိုင်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများနေထိုင်ခဲ့ဘယ်မှာရှင်းပြလန်ဒန်ပတ်ပတ်လည်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားပြာ plaque ရန်လမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည်. ဒီ app ကိုသင်ထက်ပိုပြီးကူညီရှာဖွေပါလိမ့်မယ် 900 plaque, နှင့်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာအစက်အပြောက်အတွက်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းစီစဉ်.
Musical.ly စမတ်ဖုန်းအပေါ်တစ်ဦးတပ်များ၏တစ်ခုခုဖြစ်လာသည်နှုတ်ခမ်း-synching app ကို, ဒါပေမဲ့ဒီအသစ် spinoff ကွဲပြားခြားနားသည်: Periscope များအတွက်တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်, YouNow နှင့်အခြားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-streaming များန်ဆောင်မှု. ကြည့်ရှုဖို့ chatting စဉ်အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ဖို့အပလီကေးရှင်းကိုသုံးနိုင်သည်. ဒါဟာသူ့ရဲ့အစောပိုင်းကာလအတွက် App Store ကိုဇယားတက်တဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာပါတယ်.
RunGo (အခမဲ့ + IAP)
သင်တစ်ဦးမြို့ပတ်ပတ်လည်သင့်ရဲ့လမ်းကိုကူညီရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းအခြား app, ဤအမှု၌ပေမယ့်, သငျသညျလမ်းလျှောက်မပြေးခံရဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်. RunGo ခြောသငျသညျပြောကျသောမရကြဘူးလုပ်စကားသံကိုအညွှန်းနှင့်အတူရွရွပြေးလမ်းကြောင်းတစ်စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်, နှင့် tools တွေကိုသင့်ရဲ့ကြိမ်နှင့်ကယ်လိုရီ-မီးလောင်ရာကိုခြေရာခံဖို့.
Box ကိုကျွန်း (အခမဲ့ + IAP)
အစီအစဉ်မှလေ့လာသင်ယူရန်ကလေးများအားပေးမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်, နှင့်တစ်ဦးတရားမျှတတဲ့အနည်းငယ် apps များကသူတို့ကိုကပြုပါကကူညီမှရည်မှန်း. Box ကိုကျွန်းနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပါသည်: ဂိမ်းရဲ့ boxy သူရဲကောင်းထိန်းချုပ်ဖို့ပာအတွက်အတူတကွပညတ်တော် slotting ပတ်ပတ်လည်အခြေပြု programming ကိုပဟေဠိတစ်ခုစီးရီး. ဒါဟာလက်လှမ်းနှင့်ပျော်စရာင်.
နောက်ထပ် Google အက်ပ်: iOS အတွက်ဒီအချိန်ဟာကီးဘုတ်အစားထိုး app ကို. built-in တစ်ခုက Google search button ကိုအဲဒီမှာဖွင့်ခြင်းနှင့်, ဒီဖြစ်စဉ် 2016, GIF များနှင့်ရုပ်ပြောင်အဖြစ်ကောင်းစွာကျြောစောထငျရှားဆောင်ခဲ့ကြ၏နေကြတယ်. အဆိုပါ Swype စတိုင် "သွားလာစာရိုက်" လည်းအသုံးဝင်သည်, ဤအရာသာရာအရပျမဟုတျပါဘူးပင်လျှင်သင်ဒီနေ့ခေတ်ထိုကဲ့သို့သော feature ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ဂိဒေါင်သည် AI အ - စမတ်နေအိမ် (အခမဲ့)
ဒါဟာအမှန်တကယ်တတ်နိုင်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာမှပဲ "စမတ်အိမ်" ၏စိတ်ကူးများအတွက်အစောပိုင်းစိတ်ကူးများင်, ဒါပေမဲ့ကိရိယာများနှင့်နည်းပညာပဒေသာကဦးတည်တွန်းထွက်ရှိပါတယ်. သငျသညျရှေ့လူအစုအဝေး၏ဆိုရင်ဂိဒေါင် AI အကြည့်ရကျိုးနပ်သည် - အဲဒါကိုပိုပြီးလွယ်ကူသင့်ရဲ့ချိတ်ဆက်အိမ်မှာစီမံခန့်ခွဲရန်လုပ်ရည်ရွယ်ပါသည်.
ထိတွေ့ဘဝ: အားလပ်ရက် (£ 2,49)
သားသမီးရဲ့ပြုစုသူ Toca Boca မှနောက်ဆုံးပေါ် app ကို, ဒီနီးပါးကို virtual ရုပ်၏အိမ်တော်နှင့်တူ၏: အားလပ်ရက်ပုံစံမြင်ကွင်းများ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှု, သားသမီးအလိုတော်မှာအတူကစားနိုငျသောဇာတ်ကောင်များနှင့်ပစ္စည်းများ, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်များတက်အောင်နှင့်ပင်ဗီဒီယိုများအဖြစ်သူတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်. တစ်ဦးဖွင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကစားစရာသေတ္တာ, နှင့်ကြည်နူးဖွယ်.
Screen ကို: Netflix ဟာဗြိတိန်ဗီဒီယို Discovery (အခမဲ့)
Netflix ဟာအပေါ်သစ်ကိုဖွင့်အဘယျသို့နှင့်အတူတက် Keeping ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းတာဖြစ်နိုင်, သင်မူကားတစ်ခုတည်းကိုသာဗီဒီယို-streaming ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်များအပေါ်အားကိုးချင်ကြပါဘူးလျှင်, ဒီကြိုးစားရန်တစ်နေရာလေးကို Third-party App ဖြစ်ပါတယ်. "ကိုကမကောင်းဘူးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ Get, သူငယ်ချင်းကြိုက်နှစ်သက်သောလိမ့်မယ်အကြောင်းအရာရှာတွေ့,"ကကတိပေးထား, ရှိုးပျောက်ကွယ်သွားဖို့အကြောင်းရှိပါသည်အခါသင်သတိပေးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အသစ်သောအကြောင်းအရာမီးမောင်းထိုးပြ.
ကောင်ဘွိုင်ပွဲ Stampeders – က Sky တိရစ္ဆာန်ရုံ Safari က (အခမဲ့ + IAP)
aka Crossy ကောင်ဘွိုင်ပွဲ, အမြင်အာရုံလ​​ှုံ့ဆော်မှုမိုဘိုင်း hit Crossy လမ်းမကြီးကနေယူနှင့်အတူ, ဂိမ်းကိုယ်တိုင်ကမရှိ copycat ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်. သငျသညျတိရစ်ဆာနျမြား၏အကွာအဝေး Lasso နှင့်စီးရန်ရှိသည်, နောက်ကျောကနေနောက်ကျောမှဖွယ်ရှိနေသည်နှင့်သင့် "မိုဃ်းကောင်းကင်တိရစ္ဆာန်ရုံ" အတွက်သစ်တွေကိုထိန်းကျောင်းနေခြင်း, သငျသညျကစားသကဲ့သို့သင်တို့ကို upgrade နိုငျသော.
pixel ဖလားဘောလုံး 16 (£ 2,29)
အင်္ဂလန်ယူရိုထဲကပျက်ကျခဲ့ကြပေမည် 2016, ဒါပေမယ့်ဘောလုံးလောက bug ကိုဆဲသငျနှငျ့အတူအားကောင်းနေလျှင်, pixel ဖလားဘောလုံး 16 ကြိုးစားရန်တစ်ဦးဩ oldschool Arcade ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. အပေါ်ဘက်ခြမ်းကနေ Viewed, ဒါကြောင့်သင်ကစားသမားမှကစားသမားမှဘောလုံးကို pinging ရှုမြင်, ရိုးရှင်းသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်ခံစား retro ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူ.
CSR ပြိုင်ပွဲ2(အခမဲ့ + IAP)
မူရင်း CSR ပြိုင်ပွဲတစ်လူကြိုက်များနှင့်မူရင်းမောင်းနှင်မှုဂိမ်းခဲ့သည်: တိုတောင်းသော, ချွန်ထက်ဆွဲတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘဲထက်ရှည်ရင်ခွင်-ပွဲတော်တွင်. အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲပိုပြီးခက်ခဲတဲ့နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လှပါတယ်, လုံးဝ spiffing ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူ, ကားတစ်စီးစိတ်ကြိုက်၏စာရေး, နှင့်အချို့သောကောင်းစွာထင်ထွက် multiplayer features တွေကိုယှဉ်ပြိုင်သငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်.
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စက် (£ 3.99)
ဒီနေရာမှာပိုများသော programming ကိုကျွမ်းကျင်မှု - "programming ကိုဖွင့်ပဟေဠိဖြေရှင်းရေးဖြစ်ပါတယ်" ဟုအဆိုပါ App Store ကိုစာရင်းကရှင်းပြသည်, အားပေး - သင်သည်သင်၏အခြေတည်စနိုင်တဲ့ coding ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူယုတ္တိဗေဒပဟေဠိတစ်ခုစီးရီးဖြေရှင်းရေးကိုမြင်စေတဲ့ဂိမ်းထဲမှာ. Box ကိုကျွန်းနှင့်မတူဘဲ, ဒီအသက်အရွယ်မှာရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်ထုတ်တွက်ဆရန်အချို့သောစိန်ခေါ်မှုပဟေဠိကမ်းလှမ်းသည်.
Lego မှ Star Wars: အဆိုပါတပ်ဖွဲ့ကိုနှိုးဆျော (အခမဲ့ + IAP)
console ကိုဗားရှင်းနဲ့အတူဖြန့်ချိ, ဒီနောက်ဆုံးပေါ် Lego မှ Co-branded ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, နောက်ဆုံးပေါ် Star Wars ရုပ်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အရင်းအမြစ်နှင့်အတူ. ဒါဟာစစ်တိုက်ရာတွင်အဆောက်အဦး၏တစ်ဦးပွတ်ရောနှောင်, ရုပ်ရှင်ထဲကနေ Legofied ဇာတ်ကောင်များများနှင့်ဝသကဲ့သို့ကစားရန်, သူတို့ကလာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းဖြန့်ချိနေသကဲ့သို့သင်တို့အားလုံးအသစ်ကအဆင့်ဆင့်နှင့်ဇာတ်ကောင်ရသေချာပါလိမ့်မယ်ကြောင်းနှင့်တစ်ဦး "ရာသီအလိုက်".
အိတ်ကပ် Arcade Story (£ 3.99)
ရေးသားသူ Kairosoft ၎င်း၏ဂိမ်း Dev မှ Story ဂိမ်းနှင့်အတူထိမှန်တဲ့အစွန်းရောက်ခဲ့, တစ်ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စတူဒီယို simulated သော. အဘယ်သူမျှမနောက်ဆက်တွဲရှိပါတယ် (သေး) ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်လွှတ်ပေးရန်အလားတူသွေးကြောထဲမှာတည်သည်. သင်တစ်ဦးအပန်းဖြေ Arcade run, ကို install ဂိမ်း, ပျြောရှငျတဲ့ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပြိုင်ဘက်အကြွေစေ့ကစားရုံအပေါ်ယူပြီး. ဒါဟာအလွန်စွဲလမ်းဖွင့်.
စွန့်စားမှုကုမ္ပဏီ (အခမဲ့ + IAP)
ဤ action သို့မဟုတ် RPG ဂိမ်းချစ်သောသူမည်သူမဆိုတစ်ပြင်အားရစရာဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသင်ရန်ပွဲမှသူတို့ကိုထွက်မပို့ပြီးတော့ဇာတ်ကောင်တစ်ပါတီဖန်တီးခြင်းရှုမြင်, ရှေးခေတ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းနှင့်အဆင့်အတန်းကိုတက်ရှာဖွေတွေ့ရှိ, လတ်ဆတ်တဲ့ action ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လက်နက်တွေနဲ့ရနျသူအပေါငျးတို့သဖြင့်.
Transformers: မြေကြီးတပြင်စစ်ပွဲများ (အခမဲ့ + IAP)
ဤအရာထက် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်နိုင်သ (အမှန်တကယ်ကြီးမြတ်) Angry Birds ဂိမ်း Transformers ဂိမ်း? ဒါဟာအမှန် Autobots နှင့် Decepticons ၏ဠာအပေါ်တစ်ဦးသစ္စာရှိသောအယူမယ့်, သငျသညျစက်ရုပ်-In-အသှငျပွောငျးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်ရန်အဖြစ်ထို့နောက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါသူတို့ကိုထွက်ပေးပို့, သင့်ကိုယ်ပိုင်ခံတပ်ကိုတည်ဆောက်စဉ်.
က Sky တပ်ဖွဲ့ Reloaded (အခမဲ့ + IAP)
သငျသညျ '' em တစ်ဦးဂန္ scrolling မရိုက်ကူးတက်ရိုက်နှက်မနိုင်, နှင့် Sky တပ်ဖွဲ့ Reloaded အနုပညာရဲ့အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်. ပြတ်သား, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံရိပ်ယောင်များနှင့်တစ်ဦး pulsating တေးသံကျည်ဆံများမျှော်လင့်ထားတရစပ်အတူလိုက်ပါ, အသစ်လေယာဉ်များကိုစုဆောင်းနှင့်မဟာဗျူဟာပေးသူတို့ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ.
လယ်ယာသူရဲကောင်းများစူပါ Saga (အခမဲ့ + IAP)
ရှငျဘုရငျကိုဆဲ၎င်း၏ "Saga" ဂိမ်းနှင့်အတူခိုင်သွား, "စူပါ" ထည့်သွင်းအ Candy Crush ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်. ဒါကမူရင်းလယ်ယာသူရဲကောင်းများ Saga ဂိမ်းကစားခဲ့သူမည်သူမဆိုဖို့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်: ပွဲလုပ်ရောင်စုံကောက်ပဲသီးနှံများကိုလဲလှယ်, သငျသညျဝဲရလာတဲ့အခါကူညီပေးဖို့ Boosters သုံးနေစဉ်.
ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေးင်, ယခုပုံကိုသင်တို့အဘို့အကြောင်း? အဆိုပါမှတ်ချက်တွေအပိုင်းအပေါ်က app များပေါ်တွင်သင်၏အကြံအစည်များအတွက်ဖွင့်, ကျွန်တော်တို့လွဲချော်မယ့်သူတွေအတွက်သို့မဟုတ်သင့်အကြံပြုချက်များ.
23921	5 App များ, အပိုဒ်, အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad app များကို, iPad, iPhone ကို, သတင်း, စတူးဝပ်သောင်, နည်းပညာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ
← HP က Spectre Laptop ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [VIDEO] အကြှနျုပျ၏ Laptop ကိုခိုးလျှင်ငါဘယ်လို Data ကိုကာကွယ်ပါနိုင်သလား? →